Walwal laga muujinayo amni-darrada degaannada Galmudug | KEYDMEDIA ONLINE
Walwal laga muujinayo amni-darrada degaannada Galmudug
Xaaladda amni ee Dowlad goboleedka Galmudug, ayaa mareysa meeshii ugu xumeyd, sida ay sheegayaan khuburo amni oo ka soo jeeda degaanka, waxaana walwal laga muuujinayaa sida ay doorashooyin uga dhici karaan degaanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabsida amni darro ee ka jirta degaannada Galmudug ayaa siyaadday, waxaana walwal hordhac ah laga muujinaya habka ay u dhici karaan doorashooyinaka Baarlamaan ee dhawaan la filayo in nay ka billawdaan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo.
Taliye ku-xigeynkii hore ee Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, Cabdisalaan Guuleed, oo si weyn kaga faallooda amniga guud ahaan dalka gaar ahaan degannada Galmudug ayaa sheegay in Madaxda uu ugu horreeyo Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’ ay ku fashilmeen wax ka qabashada amniga degaannada maamulka oo maraya halkii ugu liidatay.
“Ma garanayo qaabka doorasho uga dhici karto degaanka Galmudug, sida muuqada Galmudug gacanta ayay ka baxaysaa. Maamulka meesha ka jirana uma muuqdo mid difaacaya”.
Guuleed, wuxuu ugu baaqay dadka degaannada Galmudug in ay isku abaabulaan qaababkii ay isku difaaci jireen, sida uu hadalka u dhigay, wuxuuna Xildhibanaada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda deganka ku boorriyay in ay ka hadlaan amaanka faraha ka baxay.
“Al-Shabaab, waxay isku dhinac wadaan, in qabiillada qaar heehiis la galaan si ay dagaal ugu qaadaan qabiil kale. Arinkaani waa u sheqeeyey waana ku guleysteen. Sida muuqata maamulka Ahmed Qoorqoor waa ku fashilmay difaacida deegaanka uu masuulka ka yahay”. Ayuu yiri Taliye ku-xigeynkii hore ee NISA.
Al-Shabaab waxa ay xoojiyeen duulaanka ay ku yihiin degaannada Galmudug tan iyo markii ay meesha ka baxeen Kooxdii Ahlu sunna waljamaacah, oo caqiiddo ahaan ula dirirayay muddo ka badan 10 sano.
Maamulka Qoorqoor, ayaa u muuqda inuu ku fashilmay amniga guud ahaan degaannada Galmudug, waxaana tan iyo markii uu xaafiiska yimid gacanta maamulka ka baxay degaanno uu ka mid yahay Bacaadweyn oo dhaca Gobolka Mudug.